Ogaden News Agency (ONA) – Qeybta 1aad ee ruwaayada OYSU London maxay ka hadlaysa?
Qeybta 1aad ee ruwaayada OYSU London maxay ka hadlaysa?
Ruwaayadi lamagacbaxday Aan Habee Ilmahayga Hooyo Miyaan Odhan Karaa ee lagu sameeyay Magaalada London ee wadanka Ingiriiska ayaa dhowaan kusoo baxday DVD’s kaas oo loo qeybiyay Bulshada iyada oo goobo badan oo kamid ah Jaaliyadaha Ogadeniya ee Qurbaha lagu qeybiyay. Hadaba Ruwaayadan ayaa iyada oo Qeybo ah TV-ga Ilays u soo nidaamiyay qaab ku habooon Muuqaalada laga daawado Online. Qaabkaas oo ah Musalsal taxane ah oo socon doono muddo 8 todobaad ah. Waxaana laga daawan karaa Websitka Ilays TV ee www.ILAYSV.COM (Jaaliyadada ama Jaaliyada London kasoo dalbo hadii DVD’ga wali kusoo gaadhin.)
Qebta 1aad Ruwaayadi Aan Habee Ilmahayga Hooyo Miyaan Odhan Karaa!
Qeybtani waxay ka hadlaysaa u adeegayaasha gumeystaha Ethiopia iyo sida uu u xusho kuwa magacyada badan loo yaqaano ee Dabaqoodhiga, Hawaarinta, Liyuu Poliska, Jawaasiista, iyo magacyada lamidka ay bulshadu ugu yeedho kuwaasi dhaqan noocma ayay lahaayeen intaysanba ku biirin Guemystaha.
Guji Sawirka kore si aad u daawatid Filimka
Gumeysiga Ethiopia marka uu qoranayo Jawaasiis, hawaarinta ama kuwa dabaqoodhiga u ah, waxa uu intuusan qoranin mariya baadhitaan dheer oo uu ku oggaanayo kaalinta ay kaga jiraan bulshada Somalida Ogadeniya, waxuuna baadhitaan dheer kusameeya hab dhaqankoodi hore. Isaga oo Shuruudo gooni ah ka dhex raadiya qofka uu ka dhiganayo Jaajuus ama Ciidan.
Tusaale ahaan waxa uu ciidanka hawaawinta ka dhigtaa dhalinyarada da’yarta ah ee dhaqanku ka xumaaday ee awood waxbarasho laheyn islamarkaasna shaxaadka iyo maandooriyaha ku nool, kuwaas oo bulshadu dibjiriin u taqaano aan arxan laheyn oo jeeb siib iyo tuugnimo suuqa la dhex wareega. dhalinyaradaas oo laga raafo tuuloyinka ayuuu intuu si qasab ah ku kaxeysto xeryaha ciidanka u qafaasha kadibna halkaas muddo dheer tababro qalaad oo ku saabsan sidii ay bulshadooda u gumaadi lahaayeen markii lasoo siiyo waxaa lagu soo dhex daaya dadkii ay ka dhasheen.
Qeybta kowaad ee Ruwaayadan ayaa waxay tilmaameysa Mudadii aysan Ciidanka Waoyanaha ku biirin hab dhaqankoodi sida ay ahaayeen.
Waxaad arkeysa nin Magaalada intuu usoo baxo isku dayaya innuu si tuugnimo farsameysan ah innuu ku dhaco wadaad baadiyaha ka yimid oo Alahii Allaah yahay, wax badan kala socon qaab dhaqanka dhalinyarada halaabtay ee ku nool tuulooyinka.
Waxaad kale oo aad arkeysaa, Midkale oo isaga lamid ah oo raba innuu gabadh xoog ku shukaansado. dhaqankii iyo wadadii loomari lahaa shukaansigana isaga oo aqoon lagu gacan seydhayo.
Waxaa kale oo ruwaayadan qeybta kowaad tilmaameysaa, qolyahan jawaasiista, hawaarinta ama dabaqoodhiga la dhaho sida ay ulla dhaqmaaan ganacsatada yar yar ee nolol maalmeedkooda kasoo saarta wadhatooyinka iyo maqaaxiyaha suuqa. Kuwaas oo tukaamada intay iska galaan maciishada tukaanka taala iska gurta, kadibna awood u sheegta ganacsatadaas yar yar, lacagahoodana halkaas lagu dhaco.
Qeybtan oo qaab majaajule ah loo soo diyaariyay ayaa hadana waxaa ka madhneyn baraarujin lagu sameynayo bulshada inay la socdaan dadkaas guemysigu sida tooska ah u abaarayo ee dhaqan xumada uu barayo sidii looga hortagi lahaa.
Ruwaayadan Qeybteeda kowaad oo lagu bilaabayo heesta Calanka Ogadeniya waxa lagu gabagabeeya hees ka waramaysa dadkaas liita ee bulshada kamidka ah ee loo yaqaano Hawaarin, Dabaqoodhi, Ajo gudhay iyo magacyada lamidka ah. Kuwani Jaahiliin ama aqoon diimeed ama mid aduunyo miday doonaan ha sheegteene waxaa gumeysigu qoorta u sudhay tusbaxa mala awaala oo loogu sheekaynayo inay toosanyihiin. Hadaba heestan gabagabada ah ayaa lagu waaninaya loogan hadlaya qaabkii looga hortagi lahaa.
Qeybta labaad ee Ruwaayadan lasoco todobaadka danbe. Ka daawo Bogga www.ilaystv.com